Wakiilka bakteeriyada bakteeriyada ion
Websaydhka Shiinaha (wakiilka antimicrobial)
Websaydhka Shiinaha (wakiilka anti-hydrolysis)
Waa maxay dharka aan anti-bakteeriyada lahayn ee anti-bakteeriyada?
Cudurka faafa ee 2020 kuma koobnayn oo keliya inuu bulshada ku barto agabyo aan tolmo lahayn, laakiin wuxuu kaloo cajaa'ib geliyey dadweynaha codsigiisa iyo ka shaqeynta maaskaro. Xaqiiqdii, dhar aan tolmo lahayn ayaa ah alaabada guud ee caafimaadka iyo caafimaadka, waxayna leeyihiin codsiyo muhiim ah oo ku saabsan maaskarada, dharka ilaalinta, ...
Shaacinta: Sidee loo soo saaraa walxaha ka hortagga bakteeriyada?
Cudurka faafa ka dib, qof walba wacyigiisa ku saabsan antimicrobials ayaa guud ahaan kordhay. Waxyaalaha lidka ku ah bakteeriyada ayaa si dhakhso leh uga soo muuqday qaybta aragtida ee dadweynaha. Xudunta alaabta bakteeriyada waxay ku jirtaa qalabka ka hortagga bakteeriyada! Haddaba sidee loo soo saaraa maaddada bakteeriyada disha? Langyi New Mate ...
Kiisaska taleefanka ee jeermiska -— codsi caan ah oo balaastigga bakteeriyada ah
Nolosheena maalinlaha ah waxay xiriir dhow la leedahay taleefannada gacanta. Dadku marba marka ka dambeysa waxay ku tiirsan yihiin taleefannada gacanta. Bakteeriyada ku jirta taleefannada gacanta dadku si fudud ayey iskaga indhatiraan. Sida lagu sheegay sahanka, 92% taleefannada gacanta iyo 82% milkiileyaasha waxay gacmahooda ku wataan bakteeriyo. Dhexdooda, 25% mobi ...
Shan hab oo loo diyaariyo oo ah caagagga bakteeriyada
Horumarka dhaqaale ee degdega ah iyo horumarka joogtada ah ee heerarka nolosha dadka, dadku waxay aad iyo aad ugu fiirsanayaan deegaanadooda raaxada, caafimaadka iyo nabadgelyada leh. Si kastaba ha noqotee, badiyaa waxaa jira tiro aad u tiro badan oo bakteeriya ah, wasakhahaasi iyo xitaa fayrasyo ​​ku jira walxaha ...
Kiiska Adeegga | Xalliyaan dhibaatada 'PET monofilament hydrolysis'
Description Sharaxaadda Dhibaatada filter Miiraha qalajinta ee loo isticmaalo warshadaha waraaqaha waa monofilament PET. Waxaa loo isticmaalaa heerkulka sare iyo deegaanka qoyan muddo dheer. Sifeeyaha PET wuxuu u nugul yahay falcelinta hydrolysis. Ku darista wakiilka 'HyMax®' anti-hydrolysis-ka 'PET monofilament' wuxuu kordhin karaa adeegga ...
Waa maxay fiber-ka antibacterial fiber?
Feejigyada lidka ku ah bakteeriyada dabiiciga ah ee lagu daro walxaha ka hortagga bakteeriyada ee birta ah ayaa si dhakhso leh u soo baxay sanadihii la soo dhaafay. Waxay leedahay astaamaha badbaadada sare oo aan lahayn caabbinta daroogada, gaar ahaan iska caabinta kuleylka ee wanaagsan iyo xasiloonida kiimikada, waxaana si weyn loogu isticmaalay fiberka iyo dhinacyada kale ....
Sidee loo soo saaraa dharka antimicrobial ee lacagta?
Dharka antimicrobial ee loo yaqaan 'Silver' waa nooc cusub oo ah faybar shaqeynaya oo leh sifooyin antimicrobial ah. Waxaa jira laba siyaabood oo loo soo saaro dhar antimicrobial lacag ah. Hal dariiqo ayaa ah in lagu daro wakiilka antibacterial wakiilka qalinka dusha dharka, habka kalena waa in lagu daro dir ...
Sidee dadkii hore u isticmaali jireen lacag iyo naxaas si looga hortago bakteeriyada?
Waagii hore, wacyiga dadku ka qabeen nadaafadda deegaanka wuu yara yaraa, awooddooda kahortagga iyo baarista cudurradu aad bey u hooseysay. Cuduro kala duwan oo ay sababaan infekshannada bakteeriyada, sida daacuunka, qaaxada, iyo cudurka dabadheerta. Dadkii xilligaas ma aysan aqoon waxa loo yaqaan ...
Dib u soo noqoshada faafa, tiknoolajiyada madow ee bakteeriyada Langyi waxay casriyaysaa ilaalinta maaskarada
Dhawaan, aafada cusub ee faafa waxay muujisay isbeddel ku soo noqnoqoshada Shiinaha. Markii ay dawladaha hoose bilaabeen inay xoojiyaan ka hortagga iyo xakamaynta cudurka faafa, dadku waxay dib u cusbooneysiiyeen dareenkooda ku saabsan difaacooda. Xirashada maaskarada ayaa ah difaaca ugu aasaasiga ah marka aad baxayso. Wajiyadu waxay noqdeen ...
Maxay ion qalin u yeelan karaan saameyn bakteeriyada waarta?
Markii atamka lacagtu lumiyaan hal ama in ka badan oo elektaroonig ah, waxay noqdaan ion qalin. Ilkaha qalinku guud ahaan waxay leeyihiin saddex xaaladood oo qiimo leh: Ag +, Ag2 + iyo Ag3 +. Ion ion-ka waxay leeyihiin astaamo oksijiin oo xoogan waxaana loo isticmaalay daawooyin ahaan, sida lagu diiwaan geliyey farmashiyaha casriga ah. Waxaa jira afar daroogo oo ay ku jiraan ion qalin ...
Xalka anti-hydrolysis ee Polyester (PET PBT)
Polyurethane waa nooc ka mid ah walxaha polymerka oo leh sifooyin gaar ah. Waxay isku darsamaysaa sifooyinka waxqabadka ee walxaha kala duwan ee balaastigga, elastomers-ka ilaa dahaarka, sida baaxad weyn oo adag, xoog sare, xirasho iska caabin, nuugista gariirka wanaagsan, iska caabinta shucaaca, iyo Hawo pe ...
Waxqabadka wakiilka anti-hydrolysis
Qoyaanka ayaa saameeya astaamaha kala duwan ee polymerka. Jellada silica, silica wax laga beddelay, ama isocyanate ayaa dhaqso ugu falcelin doona biyaha. Sidaa darteed, ku darida qoyaanka qoyaanka qoyaanka (Qoyaanka Scavenger) inta lagu guda jiro keydinta si loo ilaaliyo xasiloonida alaabta ceeriin waa lagama maarmaan. Wixii polymer adag oo qaabaysan, ...
Cinwaanka: No.1 Bldg., No.188 Yonghang Rd., Songjiang Dist., Shanghai, 201699, PRC
Telefoonka: +86 021 6779 9029
Wakiilka Antibacterial ee Silver Ion, Anti Virus lagu daro, Anti Hydrolysis lagu daro, Masterbatch Antibacterial, Wakiilka Antimicrobial, Yarnka bakteeriyada,
Codsi Muunad Bilaash ah